I-Tech Blog |
IZIMPAWU ZEGLASI ZAMABHODLELA WAKHO
I-PERSONAL FRAGRANCE GLASS BOTTLE Amabhodlela engilazi anephunga lomuntu siqu yi-COMI AROMA. Singabakhiqizi bamabhodlela engilazi wezimboni zephunga nezimonyo. Amabhodlela ethu ajwayelekile abekwe kahle ukusiza umkhiqizo wakho. Futhi unenketho yokuba nebhodlela lakho lengilazi elenzelwe wena ...
Ingabe ukupakisha kokugcoba kungagcina izimonyo isikhathi eside?
Idizayini yekhanda le-vacuum yemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba isebenzisa amandla okuhoxa entwasahlobo ukuvimbela umoya ukuthi ungangeni ebhodleleni, okuholele esimweni se-vacuum, ngaleyo ndlela kufezekiswe umphumela wokusetshenziswa "kuphela ngaphandle kodwa hhayi". Njalo uma ucindezela ikhanda lepompo, i-piston encane ezansi kwe ...
Kungani i-essence idinga ibhodlela lengilazi le-Dark / Amber?
Indima yengilazi emnyama: Ukuvimbela imisebe ye-ultraviolet elangeni futhi kuvimbele ezinye izithako ezisebenza ngokubona izithombe ukuthi zingabi ne-oxidized futhi zibole. Ngokuvamile, amabhodlela engilazi amnyama asetshenziselwa imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba esebenza kakhulu njenge-antioxidant, anti-ukuguga, nokwenza mhlophe. Ukuhlolwa ...
Umsebenzi wokupakisha wezinto ezahlukahlukene (Ingilazi, iPlastiki)?
Amabhodlela epulasitiki ama-VS Glass amabhodlela, yikuphi okungcono? Kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko zokwenziwa kwemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba: ipulasitiki, ingilazi nensimbi. Phakathi kwazo, ama-plastiki asetshenziswa kakhulu afinyelela kuma-80%, alandelwa yingilazi, kuyilapho insimbi ibalelwa ku-8% kuphela. Yize ukusetshenziswa kwepulasitiki kunguku ...
Indlela yokwenza emaphaketheni shockproof?
Ukupakisha okungathuswa, ukunciphisa umthelela nokudlidlizela kokuqukethwe, thatha izinyathelo zokuvikela ukuvikela ukupakisha kwayo. Izinto zokupakisha ezijwayele ukusetshenziswa zifaka phakathi: ipulasitiki elenziwe amagwebu, amakhadibhodi oju lwezinyosi, ukubumba kogaga, amakhadibhodi lukathayela, iphepha, isiguqo somoya kanye ...
Imininingwane Yokukhiqiza Nezindleko-ICOMI AROMA
Amabhodlela engilazi wezimonyo ahlukaniswe kakhulu phakathi: imikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba (ukhilimu, into yokugcoba), amakha, uwoyela obalulekile, ipholishi ye-nail izigaba eziningana zamandla incane, amandla angaphezu kuka-200 ml awavamile ukusetshenziswa ezimonyo. Ngokuthengisa okushisayo izimpahla ezinesitoko esikhulu, njengebhodlela likawoyela elibalulekile ...
I-Global Glass Packaging Bottle Market Outlook
Abacwaningi kanye nezimakethe bakhiphe umbiko ngesimo semakethe yamabhodlela okupakisha ingilazi yomhlaba (2019-2027). Ngokwalo mbiko, imakethe yamabhodlela okupakisha ingilazi yomhlaba ibenze ama-US $ 63.77 billion ngo-2019 futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele ku-US $ 105.44 billion ngo-2027. Ngesikhathi sesibikezelo, i-compou ...
Izinkinga Ezivamile Ekuphrintweni Kokudluliswa Kwamanzi nezindlela zokulwa ezihambisanayo
Imbangela yokuhlaziywa kwezinkinga ezivamile ekuphrintweni kokudluliswa kwamanzi kanye nezinyathelo zokulwa nazo ezihambisanayo 1. Umkhiqizo unezimbobo, izimbotshana, amagwebu amancane nokubukeka okunzima ngemuva kokudluliswa kwamanzi. Ukuhlaziywa Kwembangela: • Imvelo yokusebenzela engeyinhle, uthuli oluntantayo, uthuli ebusweni bendawo yokusebenza noma uthuli ...
Imakethe Yokufaka Ingilazi - Ukukhula, Amathrendi, Nesimo Sezulu (2020 - 2025)
Imakethe yokupakisha ingilazi yomhlaba ilinganiselwa kuma-USD 56.64 billion ngo-2019, futhi kulindeleke ukuthi kubhaliswe i-CAGR engu-4.39%, ukuze ifinyelele kuma-USD 73.29 billion ngo-2025. Ukupakelwa Kwengilazi kwaziwa njengenye yezindlela ezethenjwa kakhulu zokupakisha zezempilo, ukunambitheka nezindawo ukuphepha. Yize ubhekene nobunzima ...
Izimonyo Namafutha Amabhodlela Emakethe Amabhodlela - Ukukhula, Amathrendi, Nesimo Sezulu (2020 - 2025)
I-COMI AROMA Letha Amabhodlela E-Beautuful Emhlabeni. Uhlolojikelele lweMakethe Izimakethe zomhlaba wonke zezimonyo namabhodlela amakha abiza inani elingu-USD 1809.28 million ngo-2019 futhi kulinganiselwa ukuthi kuzoba ne-CAGR engu-3.63% esikhathini sokubikezela (2020-2025). Ukufudukela emadolobheni, inani labantu elikhulayo leminyaka eyinkulungwane, a ...
Kungani Ukhetha Ingilazi?
I-COMI AROMA Ukuhlinzeka ngemvelo, i-100% evuselelekayo, isetshenziswe kabusha, Amabhodlela Wezempilo Wokupakisha Kwezimonyo, Ukupakisha kwe-Diffuser. www.comiaroma.com Izinzuzo zokupakishwa kwengilazi zicacile: kuyasimama, kufakwe ngaphakathi, I-100% futhi ivuseleleka ngokungenamkhawulo, ivuseleleke futhi igcwaliswe kabusha; kuphephile ukugcina ...
Abenzi be-Perfume abangakwazi ukunuka lutho.
Izinkampani ziya ngokuya ziphendukela kubuchwepheshe ukuze zenze amakha athengisa kakhulu, ahlukile angakhiqizwa ngemizuzu nje. Ngonyaka odlule, umakhi wephunga elizinze eSwitzerland uGivaudan Fragrances wethule iCarto, ithuluzi lokufakelwa elinika amandla ubuhlakani lokusiza abenzi bamakha. Usebenzisa ukuthinta ...
Isitsha sengilazi luhlobo lwengilazi lokukhiqizwa kweziqukathi zengilazi, ezinjengamabhodlela, izimbiza, iziphuzo, nezitsha. Ingilazi yesitsha imele ngokungafani nengilazi eyisicaba (esetshenziselwa amawindi, iminyango yengilazi, izindonga ezisobala, amafasitela wangaphambili) nefayibha yengilazi (esetshenziselwa ukufudumeza okushisayo, ku-fiberglass com ...
Inqubo Yokukhiqiza Amabhodlela Engilazi Inqubo yokukhiqiza ibhodlela lengilazi yenzeka efektri yesitsha sengilazi ngezinyathelo eziningi. Izinqubo Zokushisa Okushisayo Isigaba sokuqala senqubo yokukhiqiza ibhodlela lengilazi siqala ngezinqubo zokuphela ezishisayo, okuvame ukusebenzisa inani elikhulu lokushisa ukukhiqiza ...
Ingilazi yeSoda Lime-Iyini Ingilazi Yesoda Yesoda?
Iyini ingilazi yeSoda Lime? Ingilazi yeSoda lime uhlobo lwengilazi olukhiqizwa kakhulu, okwenza u-90% wayo yonke ingilazi eyenziwe. Njengoba seyenziwe amakhulu eminyaka, kuyinhlanganisela eyisisekelo ye-silica, i-soda, ne-lime enezinto ezahlukahlukene ezisebenzisekayo zezicelo ezinhlobonhlobo ...
Sonke siyazi ukuthi i-mist sprayer yenzani, ihambisa isifutho senkungu ukukhipha umkhiqizo, kepha wake wazibuza ukuthi wasebenza kanjani? Okokuqala, uyifuna kangakanani inkungu yakho? Ngokuya ngomkhiqizo wakho, ungakhetha uhlobo lwe-misting olusebenza kangcono kuwe. Isifutho esihle senkungu sikhipha okufishane, okushelelayo ...
Ukuthola iphakethe lomkhiqizo wakho kuyingxenye yokuqala yomsebenzi kuphela, manje kudingeka uqiniseke ukuthi umkhiqizo wakho uzodlula uphawu lokunciphisa umzimba nokuthi isisindo sizokhishwa kanjani. Lapha lapho ukhetha kakhulu ukuvalwa kwakho. Nazi ezinye izinto okufanele uzicabangele lapho ukhetha ukuvalwa kwephakeji yakho. Cl ...
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu ekufezeni ngempumelelo ukubukeka kwakho okufisayo yindlela iphakethe lakho elihlotshiswe ngayo. Kunezinketho eziningi ezahlukahlukene uma kukhulunywa ngokuhlobisa nokuqedela, kepha nazi ezimbalwa ezivame kakhulu: Umbala we-In-Mold Colour In-mold uyindlela elula yokusho ...
Ukupakisha iphrojekthi ebalulekile
Ukuqamba embonini yokupakisha kuyashesha futhi akupheli. Ukuzijwayeza indawo yokupakisha eshintsha ngokushesha kudinga indlela yokucabanga phambili ekutholeni izixazululo zekhwalithi ephezulu, ezihlukile, nezintsha ezizosiza izidingo eziguqukayo zamakhasimende akho. Nazi ezine ke ...
Izilinganiso ezimbili ezibaluleke kakhulu zeziqukathi amandla okugcwala (OFC) namandla okugcwalisa inetha (NFC). Ukuqonda umehluko phakathi kwalaba ababili kungasiza ekuthathweni kwephakeji efanelekile yohlelo lwakho lokusebenza nokunciphisa inani lokugcwalisa nokulebula amaphutha wesimangalo. Amandla Okuchichima (OFC) T ...
Ingilazi ibhodlela kabusha
Iziqukathi zeglasi zinikeza isisombululo esimeme kakhulu kuzidingo zakho zokupakisha. Ingilazi ingabuye isetshenziswe kabusha ngo-100% futhi uma ivuselelwa kahle kahle ayisoze yalahlekelwa ubumsulwa bayo noma ikhwalithi yayo kungakhathalekile ukuthi isetshenziswa kaningi kangakanani. Ukuphinda usebenzise ingilazi kabusha kuyinqubo esebenzayo nephumelelayo engaguqula ingilazi yakudala bo ...